iibin? sano 2 7 bilood ka hor #856
Waxaan helay email ka timid Peter Hawthorne. Waxay u egtahay isaga iyo qaar ka mid ah asxaabtiisu waxay doonayaan inay la midoobaan Rikooo. Fadlan akhri oo fiiri haddii aadan u malaynaynin inay u egtahay dhamaadka goobaha ugu fiican ee laga helo khadka. Eeg waxa aad u malaynayso.
iibin? sano 2 7 bilood ka hor #857
Waan ka xunnahay, laakiin ma haysto fariin ah waxa aad ka hadlaysid ...?
Anigu garan maayo cidda Peter Hawthorne.
iibin? sano 2 7 bilood ka hor #858
Peter Hawthorne <Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.>
Dec 11 (1 maalin kahor)
Kaliya waxaan aqriyaa DIIWAAN GALINTA FSX, FSX-Steam iyo Prepar3D - Rikoooo, waxaan tusay asxaabta qaar waxaanan u maleynaynaa in iskaashi dhexdeena si fiican u shaqeyn karo.
Anigu waxaan wakiil ka ah hay'adda suuq geynta oo hadda la shaqeynaya shirkad tiknoolajiyadeed oo hormuud u ah suuqa isla Android. Waxaan jeclaan lahaa in aan muujinno qayb gaar ah oo ku saabsan boggaaga adiga oo ka wakiil ah macmiilkayaga. Mudnaanshaha, waan ku farxi lahayn inaan ku siino meel ku taal gobolka $ 65.
Fadlan ogow fikradahaaga.
iibin? sano 2 7 bilood ka hor #859
2: 34 AM (13 saacado kahor)
Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo laabato.
Si aan kuu siino fikrad ah waxa aan sameyno, waxaanu raadineynaa inaan qoro waxyaabaha la kafaalo qaaday ee goobtaada. Muujintani waxay sida caadiga ah ku iman doontaa foomka 500-maqaalkana waxaan ku dari doonaa xiriirka 'raacitaanka' ee macmiilkayaga. Qoraaga maqaalkan ayaa waqti ku qaadanaya goobtaada oo waxaad dareemeysaa dareemada, qaabka, iyo nooca waxyaabaha aad caadi ahaan u soo dirto. Waxay tagi karaan oo ay qori karaan maqaal loogu talogalay bloggaaga. Waxaad dib u eegi kartaa, furi kartaa oo diidi kartaa maqaalka haddii aad u aragto inaysan ku habboonayn. Waxaan dooneynaa in aan ka qaybqaato boggaaga oo aan kuugu sheegno mudnaanshaha ah inaad soo dirto. Si kastaba ha ahaatee, ma sheegi karno magaca macaamiishayada ama markhaatiga marxaladan - had iyo goor kaliya marka articles la diro si dib loogu eego.
Ilaa intaad ku kalsoon tahay, waxaan sidoo kale codsaneynaa in boostada aan loo calaamadeeynin 'sponsored'.
Marka laga hadlayo, ma aqbali lahayd posts sponsored at www.rikoooo.com/ ? Haddii qiimaha aan ku bixinnay emailkayaga hore ($ 65 post per post) waa lagaa aqbali karaa, waa uun ogeysii si aan u sii wadi karno.
iibso ??? sano 2 7 bilood ka hor #860
Kuwani waa emaylka aan helayo. Waxaan ku kalsoonahay inaad aragto dareenkeyga. Uma maleynayo inaan xitaa u maleynayo inaan arkaan. Qaar ka mid ah SNAFU.
Waana ku qanacsanahay PAYSON
iibin? sano 2 7 bilood ka hor #861
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada,
Tani dhab ahaantii waa spam, iyo emaylkuna waxay si toos ah u soo saaraan spamka ama boorsada.
Ha u jawaabin
Tusaale kale halkan: www.mail-archive.com/haproxy@formilux.org/msg28201.html
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.398